Fahalalahana ho amin’ny fandrosoana | NewsMada
Fahalalahana ho amin’ny fandrosoana
Fahafahana, fahalalahana… Niverimberina indray ireo teny roa ireo, omaly 14 oktobra, nahatsiarovana ny faha-61 taona nanambarana fa Repoblika i Madagasikara. Zava-dehibe io daty io, hoy ny rehetra, saingy manao ahoana ny fiantraikany amin’ny fiainam-piarahamonina malagasy ankehitriny? Tsy azo odian-tsy hita ny fivoarana iainan’ny isam-batan’olona eo amin’izay fahafahana sy fahalalahana izay, indrindra amin’ny fanehoan-kevitra. Maro, rahateo, ny fitaovana azo ampiasaina amin’izany, toy ny « internet », azo lazaina ho mora ho an’ny rehetra. « Internet », fitaovana natosaky ny fandrosoana, tokony hoentina hampandrosoana ?
Malalaka tokoa ny fampitam-baovao sy ny fanehoan-kevitra amin’ireny tambajotran-tserasera samihafa ireny ary miparitaka vetivety ny tian-kambara. Hevitra hanatsarana zavatra sa natao hanakorontana ? Raha ny hita, indrindra amin’izao ankatoky ny fifidianana kaominaly izao, misy ihany ireo tsy maty voalavo an-kibo, tsy mahay afa-tsy ny manaratsy, manao « halako bika, tsy tiako tarehy » amin’ireo kandidà sasany.
Ambara sy anentanana ny olona hatrany ny tokony hijerena sy ny handinihana ny foto-kevitra amin’ny raharaham-pirenena toy izao. Mbola eo hatrany anefa ireo mpijery tavan’olona, mpitsikera na mpanatsinkafona izay resaka tsy misy ifandraisany na tsy misy idiran’ny fitantanan-draharaham-panjakana akory. Toe-tsaina mirefarefa amin’ny tany!
Fomba fijery heverina fa hitondra fandrosoana ny fametrahana fanontaniana hitondra voka-tsoa amin’ny hoavy. Manoloana ireo kandidà samihafa, inona ny vinany, inona ny paikadiny, inona ny tombontsoa iombonana amin’izany, sns ? Ireo ny fanontaniana tokony hapetraka. Matetika anefa, any anaty tambajotran-tserasera any, ny volon-koditra, ny fihaviana, ny taona, ny hareny sy izay momba ny fiainany manokana no ezahina hatosaka, hanaratsiana befahatany ilay kandidà.
Nomena ny Malagasy ny fahafahana. Toy izany koa ny fahalalahana, saingy raha fandrosoana no nantenaina ho vokatr’izany, toa nentina nampihemotra ny firenena ireo. Fotoana izao hanarenana izany, ary mbola tsy tara!